Ary ny any amin’ny faritra, ary ny hafa ? – MyDago.com aime Madagascar
Ary ny any amin’ny faritra, ary ny hafa ?
ireo avy any amin'ny faritra hafa
Eny, mahafinaritra sy maha be fanatenanana ny fahatongavan’ ny Président Ravalomanana. Ny mahagaga ny maro dia nahoana – nandritry izay 2 taona mahery nisian’ ny krizy izay – Ravalomanana sy ireo mpiara miasa aminy akaiky no tsy tonga saina ary tsy nahalala ni – » délocaliser » – mihitsy tany amin’ ny faritany – ny hetsika na ny meeting fa toa nihiboka fotsiny tao amin’ ny Magro tao sy teto Antananarivo fotsiny ??!!
Mino marimarina ny rehetra fa be kokoa aza ny vahoaka te hiaradia amin’i Ravalomanana any anindrana any noho ny eto Antananarivo. Tsy izany koa fa malagasy koa anie izy ireo e fa tsy ny eto Antananarivo ihany ary tokony hahafatatra bebe kokoa ny fiainam-pirenena fa tsy ny vaovao sy propagandy hafafin’ ny TVM sy ny RNM fotsiny ihany no entina amokisana azy ireo.
Ny tsapa dia tsy ampy kalitao ny mpiara miasa akaiky na « staff » an- dRavalomanana. Be ohatra ny hevitra na « arguments » tokony no entina nandresy lahatra ny vahoaka sy ny Communauté Internationale izay hita matetika tamin’itony forum isan- karazany itony fa ny an’ ny TIM fotsiny ihany tsy akory. Nahoana re no tsy no rarahin’ izy ireny akory ireny messages rehetra ireny fa toa ny tao an–tsain’ izy ireo ihany no navoakany teny amin’ ny Magro ?
7 FEVRIER 2009 Na inona na inona ho tenenin’ i RaChristine dia »zône rouge » Ambohitsorohitra sy Iavoloha misy lapa-mpirenena Mbola nisy ve mpanohitra nanafika ny palais de l’ Elysée na ny Maison Blanche …? Aty Afrika ihany no misy an’ izany. Raha tena « indépendant » mihitsy ny fitsaran – dRaCHRISTINE nahoana no tsy voateny ary voaeloka ny COMMANDITAIRES tamin’iny vono olona teo AMBOHITSOROHITRA INY iny izay toa ry Etienne AV7 sy ny tariny indray no mahazo fanampiana asa raha nahazo ny anjarany koa ny baomanga tamin’ ny 26 Janvier 2009 nanao fandrobana sy nisiany faty olona koa nefa toa tsy nahazo tsangambato !?
17 MARS 2009 COUP D’ ETAT. Nandositra hoe ny President Ravalomanana ? Aiza moa izy no tsy andositra ? Palais présidentiel Iavoloha voadidin ’ny blindés, ny fiadina mahery vaika samy hafa nalefan’ i Andry TGV ary notarian’ i Dolin, Ramakavelo, Lylison, Organès, Ra–Charles, Ratsirahonanana, andriamnjato Hasina, alain ramaroson sy ny hafa maro koa. Mba tadinareo ve ny fandosiran’ i TGV tany amin’ny résidence de FRANCE ( Ivandry) raha natahotra no hisy hanafika izy teny Ambatobe. Porofo mazava ny ingérence ny Françafrique io nandraisany any TGV. Be no tsy malala nahoana no tsy nampafataran’ i Fétison, Raharinaivo – tamin’ izany fotoana izany – fa « citoyens français » anie Andry sy Mialy e. Aiza moa no tsy hiaro ny transition ny Françafrique ?!
Mpiasan’ny faritra taloha
Auteur RakotosonPublié le 18 février 2011 18 février 2011 Catégories Malagasy, Négos, Politique, Société
5 réflexions sur « Ary ny any amin’ny faritra, ary ny hafa ? »
18 février 2011 à 15 h 22 min
Tsy afaka hiteny kosa angamba ny rehetra hoe natao anjorom-bala ny any @ faritra: sarotra ny mivezivezy @ fotoana toy izao noho ny sécurité physique.
Ry Ramaroson ve hoy ianao dia ho menatra ny handefa jiolahy hanakana ny fiaran’ireo mpitarika raha toa ka mivezivezy loatra ry zareo?
18 février 2011 à 16 h 19 min
Ka madagascar ve, PAYS DE LA DEMOCRATIE SA DEMONCRATIE ???
Avelao izy hitifitra, hamono ny mpiray tanindrazan’aminy ! Ny tantara no hitsara !!
Izany fampitahorana izany ihany no nahatonga ny olona tsy nivaoka ny trano tamin’ny mars 2009 !
Tadidio ilay hoe, marihina maintimainty ny tranon’izay manohana an’i Ravalomanana !
Fomban’ny nazi izany !
Mbola hitohy foana ve izany na 2020 aza ?
Rahoviana voa ho afaka ?
Tsy sahy loatra mandeha ivelan’Antananarivo ny mpomba an’Atoa Ravalomanana satria nailikiliny ireo olona tany amin’ny faritany fony fanjakany. Vitsy dia vitsy noho izany ny mpanohana azy any.
Porofon’izany efa nanandrana nandeha tany Ambatondrazaka anie Atoa Fetison fa nitsoaka matanjaka fotsiny e ! Nanandrana nialokaloka tao ambadik’Atoa Zafy koa izy nanao fanentanana tany amin’ny faritra avaratra, fa na ny mpomba an’Atoa Zafy tany aza dia tsy tonga nanatrika ny fivoriana nataon’izy ireo niaraka. Farany natsahatr’Atoa Zafy ny fitsidihana miaraka tamin’Atoa Fetison tany amin’ny faritra avaratra, satria saika nipatitaka tanteraka ny mouvance Zafy tany an-toerana
Olona nokaramaina re, ireo mpanankorontana any amin’ny faritra ê !
Efa lazaina fa tsy misy mihafina izay ataon’ny foza !
Raha mafy be, avelao fotsiny ny olona hanao manifestations n’aiza n’aiza !
Izany no atao hoe DEMOCRATIE !!!
Ny sefom-poza faly ery milaza fa naka tahaka an’i Madagasikara ny toniziana sy ny ejipsiana !
Koa rehefa izany ihany, avelao ny vahoaka hanoy an’izay efa NATAONY !!!!!
Tena latsa-danja tokoa ny faritra t@ ity crise ity. Marihina anefa fa efa nanao fidianan tany @ faritanin’ny Mahajagana sy Antseranana ary Toamasina ny ankolafy telo ary nahazaka olona maro. Vao nanomboka kosa anefa ny crise dia niakatra na nampiakaritra terto Antananarivo ireo tany @ faritra ka nandritra ny heritaona sy tapany dia tsy nisy mihitsyolona avy any @ faritra voasambotra. Nijanona anefa izany nanomboka teo @ Manoela ka hatramin’izao.
Ny Tao Fianarantsoa dia nosakan’ipety rakotoaniana ny hetsika rehetra fa nisy kosa tany antsirabe, sy Manaraka.
Tsy tara anefa ny faritra fa anio dia afaka mampiseho fa tena tia tanindrazana ihany koa izy ireo ary azo hiakinana satria isika rahampitso dia hiaro ny filoha Ravalomanana @ izay rehetra mety hitranga. Mazava fa ady korotana tsy hifankahitana eo raha toa ka mikitikitikany filoha ny miaramila voavidim-bola.
Eto koa dia manao antso avo ny vahoaka , aoka hitsanaga ny miaramikla legaliste sy ny reservites hanampy ny vahoaka. fa izay iohany ny porofo hitan’ny vahoaka fa tena hoan’ny tanindrazana ianareo.
Précédent Article précédent : Ankolafy telo, toko telo nahamasa-nahandro
Suivant Article suivant : La France a reconnu le coup d’état, négocie avec les putschistes assasins et refuse de renconter le Président Ravalomanana